कसरी छुटकारा पाउने अनिद्राको समस्याबाट ? | सुदुरपश्चिम खबर
कसरी छुटकारा पाउने अनिद्राको समस्याबाट ?
सन्तुलित खाना, स्वच्छ पानी, शुद्ध वायु जस्तै अपरिहार्य छ, गहिरो निद्रा पनि । चिकित्सकहरुले यसलाई औषधि समान भनेका छन् । अर्थात गहिरो निद्रा लिनु भनेको स्वास्थ्य शरीरको सूचक पनि हो ।
जब निद्रा विथोलिन्छ, स्वास्थ्यमा गडबड सुरु हुन्छ । अनिद्रा आफैमा एक यस्तो समस्या हो, जसले अरु समस्या पैदा गर्छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, तनाव, छटपटीसँगै अरु रोगहरु यसले निम्त्याउँछ ।
अनिद्राबाट कसरी छुटकारा पाउने त ? यसका केही सरल विधी छन् ।
बेलुकाको खाना छिटो खाने
निद्रा विशेषज्ञ र मेडिकल अनुसन्धार्ताहरुले धेरैजसो रातको खाना विस्तरामा जान भन्दा डेढ घन्टा पहिले खानुपर्नेमा जोड दिने गर्छन । अन्यथा अपच हुन सक्छ । अपच अनिद्राको मुख्य कारण हो ।
आफ्नो ओछ्यान बदल्ने
असजिलो डसना वा म्याट्रेसले पनि तपाईंको निन्द्रा खराब गर्न सक्छ । तपाईंलाई रातभर उठ्न र यताउता फर्कन बाध्य बनाउन सक्छ । यसले मांसपेसीहरुमा तनाव, नशा च्यापिने, शरीर दुख्ने र शारीरिक बनावटमा दिर्घकालिन क्षति पुर्याउन सक्छ । ओछ्यान सजिलो भएमा मात्रै तपाई आनन्दले निदाउन सक्नुहुन्छ ।
तपाईले आफू सुत्ने स्थानमा कामसँग जोडिएका वस्तुहरु, मोबाईल वा अन्य मनोरञ्जनका साधनहरु नराख्नुहोस । कुने विशेष स्थानलाई ‘आरामक्षेत्र’ घोषणा गरेर त्यहाँ आरामदायक निन्द्राको लागि सहायक हुने वस्तुहरु जस्तै बास्नादार मैनबत्तिहरु, ध्यान एकाग्र गर्ने संगीत जस्तै पानी परिरहेको जस्तो निरन्तर आउने आवाज आउने व्यवस्था गर्नुहोस । यस्तो गरेमा तपाईंको दिमागलाई आवश्यक शान्ती प्राप्त हुन्छ र तपाई आरामले निदाउन सक्नुहुन्छ ।
जब हामी आफ्नो कार्यस्थलमा पुरै समय व्यस्त हुन्छौं र यसपछि हामी जब एक्लो हुन्छौं त्यतिखेर चिन्ता र अत्यासको कारण हामीलाई निन्द्रा आउँदैन ।
जब अनिन्द्रा र बेचैनी एकैसाथ हुन्छ यसको अन्तर थाहा पाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले हामीले आफ्नो चिन्ता, आशंकाहरुको बारेमा समय छँदै कोही नजिकको साथीलाई यो कुरा भन्नु पर्छ जसले हाम्रो सहयोग गर्न सक्छन र त्यसले अनिन्द्राको समस्या बेलैमा समाधान हुनसक्छ ।
शारीरिक श्रम वा व्यायाम
थाकेको शरीरलाई आरामको आवश्यकता हुन्छ । दैनिक कम्तीमा पनि एक घन्टा कठिन परिश्रम गर्ने, नियमित योग वा एक्सरसाइज गर्ने, कार्यस्थलमा एकछिन भनेपनि हिँड्ने बानी बसाल्ने तथा हातहरुको हल्का परिश्रम सुनिश्चित गरेमा पनि तपाईं आरामले निदाउन सक्नुहुन्छ । अनलाइनखबर बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् *6+2=